🥇 ▷ Rumor wuxuu leeyahay Google Google ma shaacin doono Pixel Watch ✅
Rumor wuxuu leeyahay Google Google ma shaacin doono Pixel Watch
Google ayaa qorsheyneysa inay ku soo rogto culeys culus oo tikniyoolajiyad ah munaasabaddeeda sanadlaha ah ee Made In Google bisha soo socota, laakiin kuwa rajeynaya inay arkaan la tartame ka socda Google Apple Watch Series 5 aad ayey u niyad jabi doonaan.
Sababtaas ayaa ah in Google aan lagu shaacin doonin barnaamijka mudada dheer la sugayay ee Pixel Watch, ilo wareedyo ayaa sheegaya in loo yaqaan Business Insider. Warbixinta ayaa soo jeedineysa in Google ay haysato smartwatch-ka diyaarka u ah inuu ku shaqeeyo isla waqtigaas taleefanka casriga ah ee Pixel iyo Pixel XL.
Si kastaba ha noqotee, shirkadda Mountain View waxay ka tagtay aaladda markii ugu dambeysay. Go’aanka waxaa gaadhay madaxa sarkaalka Google Rick Osterloh, kaas oo doonayey luuqad naqshadeyn mideysan sida dhammaan qalabka Google oo aan u maleynaynin inuu Pixel Watch ku habboon yahay faylalkaas.
Kooxda ayaa sidoo kale la halgamayay inay smartwatch-ka si fiican ula shaqeeyaan aaladda Google Pixel, oo leh astaamo aasaasi ah sida isku-xirka xogta u dhexeeya aaladda wearable iyo taleefanka casriga ah ee aan lagu kalsoonaan karin, ayaa laga soo xigtay isha.
Ugudambeyntii, kala-duwanaashahan ayaa macnaheedu ahaa in Osterloh uu go’aansaday inuusan dooneynin “badeecad meel-dhexaadka ah ah inay hoos u dhigto magaca sumcadda qalabka ‘Google’, sidaa darteed si aan qarsoodi lahayn ayaa loo tuuray. Oo taasuna waxay ahayd
Ma cadda in astaanta ugu dambeysa ee badeecada la go’aamiyay, in kasta oo ilo wareedyo la hadlaya Business Insider ay sheeganayaan in Google uusan ku deg degin astaanta “Pixel” ee taleefankeeda casriga illaa “goor dambe” inta lagu jiro maalinta.
Hagaag, kuwa filaya kooxda naqshadeynta ee ka dambeysa Pixel 3, Pixel 3 XL iyo PixelBook waxay abuurayaan jiilka xiga ee smartwatch si ay ula tartamaan Samsung. Galaxy Watch Active2 iyo Apple Watch Series 5 way niyad jabi doonaan.
Sida laga soo xigtay Business Insider, ma jiraan wax qorshayaal ah oo loogu talagalay Google inay dib ugu bilowdo mashruucan smartwatch-ka ah waqti dhow. Marka kuwa haysta taleefannada casriga ah ee Android ee raadinaya smartwatch ama track track Fitness waxay u baahan doonaan meelo kale.
Iibka iyo taageerada hormarinta ee Google Wear OS – oo bixisa smartwatches-ka Android-ka ah – ayaan wali ahayn waxa Google laga filayo qaybta. Sidaas oo kale, uma badna inaan helno warar badan oo ku saabsan nidaamka hawlgalka iyo aaladaha bilaha soo socda.
Nasiib wanaagse, wali waxaa jira waxyaabo badan oo farxad leh oo ku saabsan dhacdada soo socota ee Google.
Shirkadda ku saleysan Mountain View waxay u muuqataa inay daaha ka qaadeyso Pixel 4 iyo Pixel 4 XL, oo ​​soo bandhigi doonta nidaam saddex-kamaradood ah oo awood u leh 8x lumis iftiinka indhaha ah, qaab Bokeh-style oo ah qaab sawir buluug ah oo la xoojiyay iyo kamarad Ultra-Lens ah. xagal ballaadhan.
Google Home’s casriyeysan ee ku hadla, oo ay ku jiraan Home Mini cusub oo lagu dhejin karo darbiga gurigaaga, ayaa sidoo kale looga wada hadlay munaasabadda.